उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था अहिले कस्तो छ ? - Sidha News
उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
काठमाडौं। करोडौं नेपालीलाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निकै चासो छ। उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे धेरैले प्रश्नसमेत गरिरहेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो होला?’
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्माले भने सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपचार प्रक्रिया थालिएको र उनको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए। डा. शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित न्यासनल युनिभर्सिटी अस्पताल (एसएलयू) मा उपचार प्रक्रिया थालिएको छ। शरीरबाट एन्टिबडी हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
‘उहाँको उपचार प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र उहाँ पूर्ण रूपमा सामान्य हुनुहुन्छ,’ शर्माले भने। याे खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैलाको थप परीक्षण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक उपचार थालिएको डा. शर्माले जानकारी दिए।
मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेले प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रान्सप्लान्ट गरिएको मिर्गाैला बिस्तारै कमजोर भएको बताए। उनले भने, ‘ट्रान्सप्लान्ट गरिएको किड्नी बिस्तारै कजमोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंगापुर लगिएको हो। त्यसपछि पहिलो चरणको उपचार सुरु भयो। पहिलो चरणमा भएको उपचारबाट प्रधानमन्त्रीमा केही सुधार भयो? कस्तो अवस्था छ? यसबारे जान्न सिंगापुर जानुपरेको हो।’
मिर्गाैला पुनः फेर्न सकिने बताउँदै वरिष्ठ मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेले उपचार विधिबाट प्रधानमन्त्री सामान्य अवस्थमा आउने या पुनः मिर्गाैला प्र*त्यारोपण गर्नुपर्ने भन्ने निर्क्याेल हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘उहाँका मुटु, फोक्सोलगायतका अंग स्वस्थ छन्। उहाँको शरीमाुर इ*न्फे*क्सन भएको छैन। तसर्थ मिगाृैला प्रत्यारोपण गर्नुपरे पनि प्रधानमन्त्री सक्षम हुनुहुन्छ। सजिलै प्रत्या*रोपण हुन सक्छ।’